यी खानेकुराहरु सँगै नखानुहोस है - ज्यान पनि जान सक्छ.... किन र कसरि ? —
१० आश्विन २०७८, आईतवार ०२:३२ admin
एजेन्सी । खाना स्वादिलो भयो भने मानिस खाना को स्वादमा हराउँछन् । तर कति पय अवस्थामा मानिस ले खाने कुराको नियम भने भुल्छन् । कहिले काँहि
यस्ता कुरामा ध्यान नदिँदा तपाइँ को स्वास्थ्यमा ग म्भिर असर पर्न सक्छ । कुनै खाने कुरा अर्को खाने कुरा सँग मिसाएर खानु घातक हुन सक्छ । यहाँ मिसाएर खान नहुने १० खाने कुराको चर्चा गरिएको छ ।
दुध र दही
दुधसँग दही मिसाएर खानु स्वास्थ्यका लागि घातक मानिन्छ । दुध र दहीमा हुने तत्वको प्रतिक्रिया शरीरमा नराम्रो हुन सक्छ । दही र दुध सँगै खाँदा पेटमा समेत समस्या हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
मासु र मिठाइ
कुखुराको मासु खानु भएको छ भने सके सम्म दुधका पदार्थहरु नखानुस् । मिठाइसँग मासु खानु नराम्रो मानिन्छ । यसले पनि पेटमा समस्या ल्याउन सक्छ ।
कोल्डड्रिङ्क्सपछि गुटका वा पान मसला
यदि तपाइँले कोक फान्टा वा अन्य कोल्ड ड्रिङ्क्स सेवन गर्नु भएको छ भने पान मसला वा गुट्का सेवन नगर्नुस् । पेपरमिन्ट भएको पान मसलासँग कोल्ड ड्रिङ्क्स सेवन गर्नु घातक मानिन्छ । यी दुईको मिश्रण विषाक्त हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
आलु र भात
हुन त हाम्रो हरेक तरकारीमा आलु हुन्छ र भातसँग खाने तरकारीमा पनि आलु हुन्छ । तर आलु र भातको मिश्रण पेटका लागि भने समस्या हुने विज्ञहरु बताउँछन् । यी दुवै कुरा एकै पटक सेवन गर्दा पेटमा कब्जियतको समस्या हुने बताइन्छ ।
प्याज र दुध
प्याज र दुध पनि सँगै सेवन गर्नु हुँदैन । प्याजसँग दुध पिउँदा छालामा समस्या आउन सक्छ । यसले दाद, चिलाउने, एग्जिमा सोराइसिस जस्ता रोग लाग्ने खतरा हुन्छ ।
माछा र दही
दही र माछाको मिश्रण पनि शरीरका लागि घातक मानिन्छ । माछाले पेटमा निक्कै गर्मी गर्ने हुँदा चिसो मानिएको दहीसँग खानु हुँदैन । यसले तपाइँलाई छालाको रोग लाग्ने र एलर्ली हुने खतरा समेत बढाउँछ ।
खाना र फल
खाना खाने समयमा फलफूल सेवन नगर्नुस् । फल सेवन गरेपछि कम्तिमा २ घण्टा पछि मात्र खाना खानु राम्रो हुन्छ । खानामा कार्वोहाइड्रेट बढी हुने र फलमा प्रोटीनको मात्र बढी हुने हुँदा यसले पेटमा सँगै खाँदा एसिडिटी बढाउन सक्छ । यसले अपच हुने वा अन्य रोगका खतरा जन्माउँछ ।
दध र कागती
दुधसँग कागती मिसाएर सेवन नगर्नुस् । यसले तपाइँको स्वास्थ्यमा धेरै हानी गर्छ । किन भने यी दुवै एकैपटक सेवन गर्दा एसिडिटी हुने खतरा हुनंछ ।
मासको दाल र दही
मासको दाल खाएको समयमा दही खानु नराम्रो मानिन्छ । यसले स्वास्थ्यमा नराम्रो असर गर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । यसबाट मुटुसम्बन्धी विरामी हुन सक्छ ।
दही र परौठा
यदि तपाइँ परौठा खाँदै हुनुहुन्छ भने दही नखानुस् । किन भने यी दुवैको मिश्रणमा शरीरमा नकारात्मक तत्व पैदा हुन सक्छ । यसले तपाइँको शरीरको उर्जा समेत घटाइदिने विज्ञहरु बताउँछन् । एजेन्सी
बलिउडका यी ३ टिभी स्टार जसले फिल्म स्टारभन्दा बढी कमाउछन् पैसा
बस ड्राइभर थिए इन्डियन आइडल १२ का विजेता पवनदीप ? ( भिडियो बन्यो भाइरल )
२५ आश्विन २०७८, सोमबार ०१:३३ admin 0
सपनाको अर्थ बुझ्न सकिदैन । सपनाहरु राम्रा वा नराम्रो दुवै देखिन्छ । कहिले काँही डरलाग्दा सपनाहरु...